एक विशेष एजेन्ट, बाधा-प्रकार, गर्भनिरोधक को लागि अभिप्रेरित - सबै को पहिलो यो कंडोम (या condo) भनेर टिप्पण लायक छ। साथै, यो यौन सम्पर्क मार्फत प्रसारित छन् सबै रोगजनकों विरुद्ध व्यक्तिगत सुरक्षा। यस लेखमा हामी तपाईंलाई भन्नेछु उत्पादनहरु यी "रबर" उत्पादनहरु को सबै भन्दा चिरपरिचित निर्माताहरु को उदाहरण कंडोम को आकार के हो।
एक कंडोम के हो?
कंडोम - एक विशेष polyurethane वा लेटेक्स कवर, शुक्राणु लागि अभेद्य छ। यसलाई बलियो (खडा) लिंग धारण छ। उपकरण को उद्देश्य - यौनजन्य जुन अवधारणा र विभिन्न रोगहरु रोकन मा।
कंडोम को इतिहास
यो कंडोम बारेमा चार शताब्दीपछि पहिले थिए विश्वास छ। सबैभन्दा प्राचीन (प्रागैतिहासिक) कंडोम स्वीडेन पाइएको थियो र फिर्ता 1640 मिति (!)। यो ट्यूडर राजकुल मा एक निश्चित चार्ल्स राजा हेनरी आठ लागि कंडोम द्वारा आविष्कार भएको थियो। यसको लागि सामाग्री चाहेको गर्न धेरै बाँकी: यो भेडा को एक साधारण आंतों mucosa थियो। यस मामला मा, कंडोम को आकार गर्दा सीधा पशु को उमेर मा निर्भर: पुरानो यो पनि लामो छ र आफ्नो intestines मा मोटा। केही वैज्ञानिकहरू-इतिहासकारहरूले पहिलो कंडोम Yulii Tsezare द्वारा pederasty को heyday मा फिर्ता पुरातन मिश्र र प्राचीन रोम गर्न मिति कि दाबी गर्छन्।
कंडोम को आयाम
एशियाली (सानो) र युरोपेली (ठूलो): धेरै मानिसहरू त्यहाँ कंडोम कम्तिमा दुई आकार हो कि पूर्ण पक्का छन्। सज्जनहरु, यो सबै भन्दा साधारण मिथक छ! यस्तो प्रादेशिक delimitation अवस्थित छैन। कंडोम को उत्पादन खाता मात्र फरक पुरुष शरीर विज्ञान मा लिएर, विशिष्ट स्तर अनुसार बाहिर छ भन्ने तथ्यलाई। उदाहरणका लागि, EU मा नियमहरु 44-56 मिमी अनुरूप लेखको नाममात्र चौडाइ (व्यास) spelled, र रूसी राज्य मानक 50 54 एक्स मिमी को एक व्यास संग कंडोम को उत्पादन आवश्यक छ। आयाम कंडोम एक वा अर्को निर्माता सिधै निर्भर छन्। प्रत्येक कम्पनी केही आयामका उत्पादनहरु को दायरा उपलब्ध छन् जो कंडोम, यसको लाइन उत्पादन गर्छ।
रबर सामान को सबै भन्दा लोकप्रिय निर्माता "Contex" निम्न आकार मा यसको उत्पादन उत्पादन:
सानो कंडोम मापदण्डहरू 160h49 मिमी छ,
सबै भन्दा ठूलो - 214h56 मिमी।
यो हाम्रो देशमा बिक्री न त सानो न त को सबै भन्दा ठूलो कंडोम निर्माता लागि छैन कि रोचक छ। सबै भन्दा ठूलो कंडोम कम्पनी रूस मा "Contex" 190h54 मिमी को एक आकार छ।
यो कम्तिमा रबर उत्पादनहरु को एक लोकप्रिय निर्माता रूसी बजार संग कंडोम विनिर्माण आकार लार्ज "सुविधा" भनिन्छ। 220h57 मिमि: यदि यो संख्या अनुवाद छ, हामी एक आकार यहाँ प्राप्त गर्नुहोस्। खराब छैन, सही?
प्रिय मानिसहरू! एक कंडोम खरीद गर्दा सधैं आफ्नो आकार ध्यान! यो यसको प्रयोगमा को दक्षता मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, उत्पादन पनि तंग छ भने, यो सेक्स को समयमा तोड्न धेरै सम्भावना छ। को कंडोम धेरै ठूलो छ भने, यो आफ्नो साझेदार को योनी मा पर्ची गर्न सक्छन्। प्रत्येक निर्माता प्रतियोगिहरु देखि आकार मा जो फरक कंडोम, यसको आफ्नै लाइन छ मनमा राख्न निश्चित हुनुहोस्।
"Chyavanprash" - यो के हो? आयुर्वेदिक औषधी "Chyavanprash"
नवीकरण: रमाइला विचार
मकै सिरप के हो
गर्भावस्था को समयमा Persen
ठूलो गणितज्ञ Eyler लियोनार्ड: गणित मा उपलब्धिहरू, केही रोचक तथ्य, एक संक्षिप्त जीवनी
स्वादिष्ट र स्वस्थ: मह संग हरियो अखरोट